Ungamanikidza sei hurumende kuti dzichinje asi uchiramba vanhu? : Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa8 November 2019	• 8 Comments
Isu takaona kuratidzira kwakawanda mumavhiki apfuura uye zviri pachena kuti varimi vazhinji, vavaki uye vamwe vazhinji vakatsamwa. Kana chimwe chinhu chakadai chikaitika, uchaona kuti vezvematongerwo enyika nevezvenhau vari kuzoita control control. Mapurogiramu eTerevhizheni akadai seaya aJeruen Pauw kunyanya ari maseneta mukukuvadza uku nekudzora kuona.
Vashandi vekuchengetedza vechidiki vanofanirwa kuchengetedzwa kubva kumhirizhonga yevabereki vakatsamwa pachinzvimbo chekuti vabereki vakatsamwa vadzivirirwe kubva kushungurudzwa kutenderedza mari-yakatenderedza-pombi muchina umo vazhinji vanowana zvokurarama nazvo, kazhinji vasingatarise kutambudzika kwavo. Mauto anofanirwa kuchengetedzwa kubva kune vezvematongerwo enyika vanotenda kuti kuputika bhomba ndiko kuponda chaiko. Kana varimi vakatsamwa, kunyangwe vanoparidza pepanhau nhamba 1 yakagadzirira kuudza kuti vanhu vazhinji muNetherlands vanotenda kuti nyika yakapinda matanho ayo akasvibira. Kana zvese zvabva mumaoko saka iwe unoda kuvhara iyo inodonha pachako. Zvinotaridza kuti vanhu vazhinji vechiDutch vanomuka chete kana ichinge yarova chikwama chavo pachavo kana basa rakachengeteka. Hunhu hunowanzoita kunge hwechipiri kune rako pachako basa kana basa, asi kana wallet yako kana chengetedzo ikarohwa, zviri nani kumukira.
2019 Kunyanya, riri gore umo mapoka ese ehunyanzvi anoshanda zvakananga kana zvisina kukodzera kuti nyika itaridzike sekutyisidzirwa, kurwiswa kana kuurayiwa. Kwete chete magweta, asi ikozvino zvakare ma curators, vevashandi vekuchengetedza vechidiki uye vatori venhau vanofanirwa kuwana dziviriro yenyika. Zvinogona here kutaura chimwe chinhu pamusoro pekuti kutyisa kukuru kuri kuitika munharaunda uye nekudaro kutambura kwakawanda kuri kukonzerwa? Vatori venhau ndivo vakashungurudzwa neanonzi matsotsi matsotsi, asi izvo zvinoratidzika kunge zvakanyanya kuve nechinangwa chekubvumira vanyori vekuparadzira nhau kuti vaenderere mberi kuburitsa nhau dzadzo dzisina chokwadi nekusarangwa. Isina kusimbiswa? Ehe, hongu, zvakavakirwa zvakanaka, nekuti nekuda kwenyaya dzevatapi venhau ava uye mamaneja ekuona mumakore achangopfuura, isu tava nemavara asingazivikanwe korona kana iyo isingazivikanwe source uye chaizvo zvinhu zvese zvinogona kugadzirwa uye kutongwa nevezvenhau ikozvino inopa veruzhinji kumiswa.
Kana zvinhu zvikasanzwisisika, iwe unogara wakaronga kupokana munzira yemasangano evashandi nemisangano yezvematongerwo enyika. Iwe ungangodaro uchayeuka kuti Wim Kok akazova sei wezvematongerwo enyika kubva kumubatanidzwa wezvekutengeserana mutungamiri. Mibatanidzwa yemabhizimusi iripo kuti ive neyakaipokana munharaunda ichipwanya sosi nenzira yakadzora. Izvi zvinoshandawo kumapato ezvematongerwo enyika uye nevarume vepamberi. Chero kuravira munharaunda kunogona kuyerwa kuburikidza nehombe dhata masisitimu kana kuona nhamba uye kunogona kukurudzirwa kuburikidza neredhiyo, TV uye magariro enhau mauto anofambisa hurukuro. Uye kana zvichityira kuenda zvishoma zvisiri izvo, iwe unotumira wezvematongerwo enyika mune inodhura minister limousine mune sutu uye inoperekedzwa nemakamera akawanda kuti apinze vanhu nekutaura kwerudzi, kuratidza vanonzi vanonzwisisa, asi meseji iripo imwe yasara ye "zvinodikanwa uye tinofanira kudaro". Iwe unonyatsofunga here kuti Mark Rutte ane hanya ne chikwama chako kana kugara kwako zvakanaka? Iwe unonyatsofunga here kuti nyangwe wezvematongerwo enyika kana mumwe anobhadharwa zvakanyanya mitezo yekuona pane tube ane hanya nekugara kwako zvakanaka? Kwete.
Saka kana tichida kuchinjisa chimwe chinhu munharaunda, saka isu hatingofaniri kungobata chete mapombi ekuzvimbirira kana achizvimenya, asi inguva yekutanga kutarisa zvakadzama pane izvo zvisiri izvo. Kune izvo iwe unofanirwa chaizvo kutarisa kwete kunze kwenhau uye zvematongerwo enyika. Tarisa zvinopfuura mhino dzako. Izvi zvinonyanya kufunga nezve shanduko huru mukati medu, maitiro edu epasi uye kuti tinoridzwa sei nyore. Kana tikatanga kuona kuburikidza nenzira dzese dzatinotamba uye kunyengerwa, tinokwanisawo kushandura nyaya yacho pamwero wakakosha. Izvo hazvigoneke nekuisa tipp-ex pachiratidziri. Kune izvi tinofanira kutaura zvinokonzeresa chimwe nechimwe. Tinofanira kuita hunyengeri uye kunyengera zvigadziriso zvese kuti uone kuburikidza nehurongwa uye ubve pane iyo hunyengeri uye kunyengera. Chaizvoizvo hatisi kungotaura nezve vezvematongerwo enyika, mamaneja e-media ekuona (akadai saJeruen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk, nezvimwewo), asi nezve nezvekupikiswa kuri kuita zvematongerwo enyika, mubatanidzwa wevatengesi uye nenzira yekupinda munharaunda.
Mubhuku rangu idzva ini ndinokurukura zvese matura ekunyengedza uye ini ndinouyawo nemhinduro dzakajeka dzakagadziriswa. Iyi inguva yekunyatsopinda muchiitiko uye kuti kunyatsoita chiitiko kunotanga nekuona kuburikidza neaya ese matanho ehurongwa muchinhu chaicho sezvatinofunga kuti tinochiona. Iwe unonyatsoda kutengesa rako bhuku Vrijland? Ndanga ndichinyora 7 pane ino webhusaiti nokuzvidira kwemakore uye zvakandibhadharira mari yakawanda. Nekudaro, ini handigoni kupfupisa iwo makore 7 zviri nani pane mubhuku, uye ndosaka ini ndatora dambudziko. Pfupi uye kusvika kune iyo, asi girazi rakajeka uye rakanyorwa pasi nerudo. Ini ndinoisa simba rakawanda mazviri, nekuti mumaonero angu chimwe chinhu chinonyatsofanira kuchinja. Iyi inguva yekuchinja kukuru kwenzanga uye inogona kungouya chete kana maziso akavhurika kubwinya uye munzira dzose. Ndakaita zvandinogona. Gara wakamira kana kusimuka. Unotora chikamu here?
Geert Wilders uyo anopandukira
Thierry Baudet achaita kuti vaNetherlands vafare zvakare! Zvechokwadi!
Nhaurirano pakati paMark Rutte naT Thierry Baudet inoratidza kuti haufaniri kuvhota
Ini ndinofunga kuratidzira kwave kuripo zvechokwadi kuri kushoma.
Ko kuratidzira kwacho kwakabatsireiko! Nada. Kana iwe uchiratidzira iwe unofanirwa kuenderera kusvika wawana chimwe chinhu uye ipapo wakuda pane chena. Zvikasadaro vanobva kune imwe nyika 'vanyoro' vanozongokuseka iwe uye vatove nerevo ratidziro diki murondedzero yavo kuti rimwe zuva rekuratidzira.
Muchokwadi, ivo vangangove vane yavo pawns musangano ..
Ndizvozvo, ndiwo maitiro anoshanda, asi sezvandambotaura, "nerombo rakanaka isu tinogara mu" mutemo wemutemo. " Chikamu.
Enzanisa mamiriro ezvinhu aripo semusanganiswa weGeorge Orwell mamiriro uye nenyika itsva yehushingi yaHuxley. Musanganiswa wakanaka, jongwe, harisi kuzopotsa. Cheers Guys inoramba ichishandisa yako script.
Pandakashanyira vabereki vangu ndakaona zvinotevera paterevhizheni:
Zvakatora kanguva ndisati ndanzwisisa kuti nei pakanga paine kupisa uye kushungurudzika (uye mumaonero angu kusabvumirwa) mhinduro kune iyi nhaurwa naRenske Leijten. Mukupedzisira ine chekuita neboka diki revanhu ve8500 iro iro rinotsamwisa kwazvo, asi kune kunetswa kwakakura muhurumende. Kusvikira paminiti 22: 05 iyo yemazuva ano yemazuva ano maitiro akagadzirwazve mune reform fomu neanoratidzira: "Asi zvakaipa sei izvi, izvi chaizvo zviri hurumende inotendeuka kupesana vagari vayo". Chandinoreva neizvozvo ndechekuti hurumende inofanirwa kuchengetedza vagari vayo asi ikatadza kuzviita.
Takaendepiko isu takawana mushumiri akadaro akazivisa izvozvo zvinonzwika. "Hurumende iripo kuchengetedza vagari vayo uye yakakundikana zvakanyanya."
Dzimwe nguva ndinotomboyemura kuti nzira dzinoshandiswa dzakashanda zvakadii. Vabereki vangu vaive zvizere mu "kunyadzisa !!" maitiro. Dzimwe nguva ndinoda kutsanangurira vabereki vangu kuti sei pfungwa yavo inotsauswa kubva pane zviri kuitika nekuenda zvakanyanya kuchinhu chidiki asi chine moyo.
Panguva ino ini ndakarega kuedza ikoko. Kana iyo psycholance ichiita kutaridzika kwayo (inowanikwa kuburikidza nefoni nhamba 11-11, yakanaka, kaviri nhamba yekupenga, lache!) Ndiri kutya kuti ini ndichadaidzwa padanho repamberi ...
"Chokufambisa chakakodzera chinodiwa nekuti vanhu vasina kupara mhosva havave mumotokari yemapurisa." Uye zvakare, ambulensi inowanzo isiri yakakodzera mune iyi kesi. Nekushandisa kutakurwa kwakakodzera, vanhu ava vanoendeswa nehunyanzvi munzira yakachengeteka, inofadza, isina kushatisa. Rubatsiro rwakapihwa mutyairi akakodzera kutakurwa neZonMW kwenguva yegore rimwe. Pakati peino nguva, ichaongororwa kangani uye kana yakakodzera kutakura inoshandiswa. Uye zvakare zvinoonekwa izvi nevanhu vari kutakurwa: vanhu vane hunhu hwekuvhiringidzika uye nevadiwa vavo. "
Huya muGeorge Orwell ... waireva izvi nehurukuro nyowani?
"Kutakurwa munzira yakachengeteka, inofadza, isina kushatisa nzira, inoshanda"
Iyo psycholance ndeyekutsanangura kwebasa iro magavhuna akapiwa nehurumende kuti vaone maitiro anoshanda e1 Gumiguru 2018 maererano neVanhu vane Vakavhiringidzwa Behaviour group.
Damn, ini ndakanga ndisingazive kuti chinhu chakadai chaityaira! Neraki ini ndinogara kumadokero kwenyika!
Quotation kubva pane iri pamusoro chinyorwa:
“Zvisinei, mapurisa anofanirwa kugara achitarisisa kwepfungwa. Ipapo mumiririri anotyaira kuitira kuchengeteka kwevashandi. Mugore rechipiri iro psycholance inomhanya, kuwedzera kudiki kwehasha kunogona kuoneka. "Ndizvozvo zvakare nekuti tin kutyaira zvakanyanya, asi mapurisa anozivawo kwatinowana," anotsanangura Hendriks. "Uye kungofanana munharaunda, kunewo kuwedzera kwehasha pamwe nesu."
Wangu wapfuura muvakidzani akashanda sehama ambulensi hupenyu hwake hwese. Ini ndakabvunza kana hutsinye hwakananga kune vashandi veambulance hwawedzera pamusoro pemakore. Mhinduro yake yakanga yakajeka: “Kwete, zvagara zvakadaro mumakore ese iwayo. Musiyano ndewekuti nekuda kweshoko renhepfenyuro nenhau dzezvemagariro, vandinoshanda navo dzimwe nguva vanotoziviswa ndisati ndadzoka kudzimba. ”
Ehe, ruzhinji rwevanhu rwatoendeswa kuGGZ gulag
« Chii chiri dambudziko re nitrogen, nei varimi vachinyunyuta uye nei kudzora kuchikurumidza?
Nhanho yekutanga inonyora, iyo yechipiri nhanho kusasanganiswa: bhatani rekudzivirira »
Martin Vrijland op Iyo yemapurisa yakaipisisa kupfuura yeGerman yeNazi inoitika kunge mhumhi mune chipfeko chemakwai uye hauzvione
Sunshine op Iyo yemapurisa yakaipisisa kupfuura yeGerman yeNazi inoitika kunge mhumhi mune chipfeko chemakwai uye hauzvione
SalmonInClick op Iyo yemapurisa yakaipisisa kupfuura yeGerman yeNazi inoitika kunge mhumhi mune chipfeko chemakwai uye hauzvione
Marga op Iyo yemapurisa yakaipisisa kupfuura yeGerman yeNazi inoitika kunge mhumhi mune chipfeko chemakwai uye hauzvione
Itai 1.683 vamwe vanyori